Maitiro ekuverenga mamwe mabhuku pagore | Zvazvino Zvinyorwa
Maitiro ekuverenga mamwe mabhuku pagore
Verenga. Tsika iya yakanganwa vazhinji. Nekudaro, kune vashoma vachiri nebhuku mumaoko avo, kungave pabepa kana padhijitari, uye vanoshandisa iyo shoma nguva yemahara yavanayo kufambira mberi mukuiverenga.
Nekudaro, yakakura kwazvo chikamu chevagari, ingave yeSpanish kana yepasirese, havazowana bhuku kuverenga gore. Vamwe vanozozvidarika. Kana iwe uchida kuve mune iro repiri boka, iwe unofanirwa kupinda mutsika yekuverenga. Asi zvakare kuti iwe unoda kuzviita. Saka, Tiri kuzokupa mamwe matipi kuti iwe ugone kuziva nyaya, kwete chete kubva mubhuku rimwe chete, asi kubva kune mazhinji, pagore.
1 Dambudziko rakanyanya mutsika: kuverenga mabhuku mazhinji
1.1 Iva nekona yako yekuverenga
1.2 Sarudza mabhuku nekutungamirirwa nezvaunoda
1.3 Tora nguva shoma kuverenga zuva rega rega
1.4 Kana usingade bhuku iri, rinyore pasi
1.5 5. Tarisa mabhuku anokwezva meso ako, usatungamirirwe nefashoni
Dambudziko rakanyanya mutsika: kuverenga mabhuku mazhinji
Zvingaite sezvisina musoro. Asi kuverenga mabhuku kune zvakawanda zvakwakanakira. Kana iwe ukaverenga imwe iko kwatova kubudirira; Nekudaro, izvo zvandinokurudzira ndezvekuti, unenge mwedzi, nyaya inotanga nekuguma inodonha nemaoko ako.
Kuchengetedza nguva shoma hakuna kuoma, uye iwe uchawana makomborero makuru kubva kwazviri.
Zvino, sei kuzviita?
Iva nekona yako yekuverenga
Izvo zvakakosha kuti uve nenzvimbo yekuzorora uye kunyudza mukuverenga. Kuverenga paunenge wakamirira vana vako kuti vaite homuweki yavo, kana kuve neterevhizheni yakavhurwa, haisi iyo yakanakisa, nekuti iko kusungwa hakuzove kwakafanana.
Chigaro chemaoko, mwenje. Zvese izvi mu kona yakanyarara yemba yako zvichave zvakakwana kutanga nyaya iyo yakamirira kutaurwa mupfungwa dzako.
Sarudza mabhuku nekutungamirirwa nezvaunoda
Kune akawanda akasiyana zvinyorwa zvemhando uye iwe zvechokwadi uchafarira imwe kupfuura imwe. Kana iwe usingazive, saka ini ndinofunga izvozvo mwedzi wega wega sarudza bhuku pane dingindira zvakasiyana: kudanana, kufadza, kutya, sainzi ngano, fungidziro ...
Nenzira iyi, iwe uchavandudza zvaunofarira sezvo, kana iwe usina kuzvifarira, imhaka yekuti iyo genre inogona kunge isiri yako. Nezve izvo zvese, ini ndinokurudzira kuti uedze kakati wandei Pamwe haisi iyo yemhando iyo yausingade, asi iyo nyaya yebhuku iro.
Tora nguva shoma kuverenga zuva rega rega
Sezvandambotaura kare, tinogona kugara tichitora maminetsi mashoma kuverenga. Naizvozvo, funga nezve zuva rako, nezve zvese zvaunofanirwa kuita, uye sarudza nguva mairi muchakwanisa kubata bhuku musingavhiringidzwe nechero ani. Kunyangwe iri hafu yeawa.
Nditende kuti, kana nyaya ikakubata, pakupedzisira iwe uchazoda kushandisa imwe nguva uye, kwete izvozvo chete, asi iwe uchazotora bhuku rinotevera nechido chakanyanya nekuti unozotarisira kunzwa zvakafanana neiyo yapfuura.
Kana usingade bhuku iri, rinyore pasi
Kune vazhinji, uku kusazvipira. Asi kana iwe usina tsika yekuverenga, kana uine mumaoko ako bhuku rausingade, kana kana iri nguva yekuverenga unoita chero chinhu kunze kweizvozvo, haisi nguva yenyaya iyoyo.
Panguva iyoyo, gara uine chimwe kana zviviri zvinotsiva zviripo iyo yaunogona kutevedzera yako yekunyora maitiro zuva nezuva. Nekudaro pachave nekugara kuine kuchengetedza kuchamirira mukana wayo kuitira kana sarudzo yekutanga yanga isiri iyo chaiyo.
5. Tarisa mabhuku anokwezva meso ako, usatungamirirwe nefashoni
Kuenda nemabhuku anotengesa zvakanyanya ndicho chinhu chakaipisisa chaungaite. Handina chandinopesana nacho, asi hupfumi hwechokwadi hwekunyora hausi pakati pezvinyorwa izvi. Dzimwe nguva zvirinani kutsvagisa zvishoma uye kutorwa nekufungidzira, kungave kavha kana chirevo, kutenga uye kuverenga.
Pachave nenguva yekuverenga mabhuku anoonekwa zvakanyanya mumapepanhau, mumagazini, terevhizheni kana paInternet.
Uye ndezvekuti kuverenga mamwe mabhuku pagore hakuna kuoma, iwe unofanirwa kungozviona seyakaoma. Asi imwe yeaya auri kuzosangana nawo chaizvo. Ramba uchifunga kuti iwe unogona kusarudza kubva pamapeji mazana matatu uye, wakakamurwa mumazuva emwedzi, iwe unowana mapeji gumi pazuva. Chii iwe wakamirira kutanga neiyo yekutanga?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Maitiro ekuverenga mamwe mabhuku pagore